လင်ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေဖို့ – Gentleman Magazine
ယောက်ျားတွေဟာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မရခင်ကတော့ အသေအလဲ ပိုးပန်းကြပါတယ်။ ရပြီးသွားတော့ အရမ်း အရေးမလုပ်တော့ပါဘူး။ ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခုကိုရဖို့လျို့ဝှက်ချက်ကတော့ သူမကို ဂရုစိုက်တဲ့ အပြုအမူ အသေးစားလေးတွေပါပဲ။ အဲဒိလိုမျိုး အပြုအမူ အသေးစားလေး ဆယ်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ သင့်မိသားစုဘဝနဲ့ သင့်ဇနီးပျော်ရွှင်ဖို့ သင်အားထုတ်မှ ရမှာပါ။
ဒါကို ထည့်ပြောစရာမလိုဘူး မထင်ပါနဲ့။ လက်ထပ်ပြီးတာ ကြာတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ လိင်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝ အလုပ်ပင်ပန်းမှု စိတ်ဖိစီးမှုကြားမှာ လိင်ကိစ္စဟာ အောက်ဆုံးကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ မှားပါတယ်။ လိင်ကိစ္စဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို အမြဲ သစ်လွင် နုပျိုနေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၂. သင့်ကလေးတွေကို လျစ်လျူရှုထားပါ ( မိနစ်အနည်းငယ်ပါ)
သူမကို တစ်နေ့ကို သင့်အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက် တခြား တီဗွီတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ ကလေးတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ မပါပဲ သူမကိုပဲ လုံးဝ သီးသန့် အချိန်ပေးထားပါ။ သူမကို ဒီနေ့ အဆင်ပြေလား၊ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သေးလဲ။ မေးပေးပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သင် ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြရာရောက်ပါတယ်။
၃. သူမကို အိမ်ပြင်ထွက်လည်ခွင့်ပေးပါ
အချိန်တိုင်း တူတူရှိနေတာဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ လူနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝါသနာ အမူအကျင့်တွေကို တစ်ယောက်က လေးစားနေရမှာပါ။ သင့်မိန်းမ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားအိပ်ရင် မတားပါနဲ့။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးထွက်ခွင့်ပေးပါ။ သင့်မိန်းမကို သင်နဲ့ချည်းတစ်ချိန်လုံးမထားပါနဲ့။
၄. အသေးစိတ်တွေ လိုက်မပြောပါနဲ့
သူမကို အရာရာမှာ မထိန်းချုပ်ချင်ပါနဲ့။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဟာ ပြသနာတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံခြင်းကွာပါတယ်။ သူမဖြေရှင်းနေပြီဆိုရင် သင့်ပါးစပ်ပိတ်ထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူနှစ်ယောက်ကြားပြသနာတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုပဲ ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆင်မပြေတာကြုံရတိုင်း ဖြေရှင်းဖို့ စကားများနေမယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်တာကို လုပ်နေတာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ပေးလိုက်ပါ။
၆. သူမကိုလည်း နားထောင်ပေးပါ
သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ပေးတာဟာ “ဟုတ်ကဲ့” ပြောပြီး ပါးစပ်ပိတ်ထားခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်က သူမအကြောင်းပြချက်ကို နားထောင်ပေးပြီး သူမဘက်ကနေ စဉ်းစားပေးရမှာပါ။ သူမ ပြောတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးထင်ရင်တောင် အဲလိုလုပ်ရမှာပါ။ အဲဒါ သဘောတူပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ သူမကို ပိုနားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားတာပါ။ ရန်ဖြစ်နေချိန် သွေးပူနေတုန်း နားထောင်မပေးနိုင်ရင် တခြား အေးဆေးသွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၇. သူမနဲ့ ပလူးပလဲနေပါ
သူမကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သူမကို ပလူးတဲ့စာလေးတွေ ပို့ပါ။ သူမကို လန်းတယ်လို့ ပြောပါ။ မွေးနေ့ နှစ်ပါတ်လည်တွေလမဟုတ်တဲ့ ညတွေမှာလည်း အိမ်ပြန်ရင် သူမအကြိုက် ကိတ်မုန့်လေး ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ယူသွားပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေကို တခြားသူစိမ်းတွေလောက်တောင် အာရုံမစိုက်မိတတ်ကြပါဘူး။ သူမလည်း သင်ဂရုစိုက်တာ အရမ်းလိုချင်မှာပါ။
၈. သင့်ဖိအားတွေကို ထုတ်ပြောပါ
ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ သူတို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို တိတ်တိတ်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ အပြင်ထွက်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်စေ ရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ သင့်မိန်းမကို တလွဲထင်သွားစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သင့်မိန်းမကို ပြောပြပြီး သူမဆီကနေ အကူအညီ ရယူလိုက်ပါ။
၉. အတိတ်ကို ပြန်သွားပါ
တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်တို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုကနေဘယ်လို တူတူနေမိကြတာလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရမှာပါ။ ပုံဟောင်းတွေ၊ ရည်းစားစာဟောင်းတွေ ပြန်ကြည့် ပြန်ဖတ်ပါ။ သင်နဲ့သူ ပထမဆုံးတွေ့တုန်းက ရင်ခုန်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ပြန်ခံစားနိုင်ပါသေးတယ်။
၁၀. သင် သူမကို ချစ်တဲ့ အချက်လေးတွေ ပြောပြပါ
အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တန်ဖိုးထား ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ သင်ကတော့ သင် သူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ သင်သူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာ သူသိနေပြီ ထင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူမကို ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ အမြဲ ပြောပေးနေရမှာပါ။
ယောကျြားတှဟော ကောငျမလေးတဈယောကျကို မရခငျကတော့ အသအေလဲ ပိုးပနျးကွပါတယျ။ ရပွီးသှားတော့ အရမျး အရေးမလုပျတော့ပါဘူး။ ကောငျးမှနျပြျောရှငျရတဲ့ မိသားစုဘဝတဈခုကိုရဖို့လြို့ဝှကျခကျြကတော့ သူမကို ဂရုစိုကျတဲ့ အပွုအမူ အသေးစားလေးတှပေါပဲ။ အဲဒိလိုမြိုး အပွုအမူ အသေးစားလေး ဆယျခကျြကို ဖျောပွထားပါတယျ။ ကွိုးစားပွီးလုပျကွညျ့ပါ။ သငျ့မိသားစုဘဝနဲ့ သငျ့ဇနီးပြျောရှငျဖို့ သငျအားထုတျမှ ရမှာပါ။
ဒါကို ထညျ့ပွောစရာမလိုဘူး မထငျပါနဲ့။ လကျထပျပွီးတာ ကွာတဲ့ စုံတှဲတှဟော လိငျကိစ်စကို စိတျဝငျစားမှု လြော့နညျးလာတတျပါတယျ။ နစေ့ဉျဘဝ အလုပျပငျပနျးမှု စိတျဖိစီးမှုကွားမှာ လိငျကိစ်စဟာ အောကျဆုံးကို ရောကျသှားတတျပါတယျ။ အဲဒါဟာ မှားပါတယျ။ လိငျကိစ်စဟာ အိမျထောငျရေးကို အမွဲ သဈလှငျ နုပြိုနဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
၂. သငျ့ကလေးတှကေို လဈြလြူရှုထားပါ ( မိနဈအနညျးငယျပါ)
သူမကို တဈနကေို့ သငျ့အခြိနျ ၁၅ မိနဈလောကျ တခွား တီဗှီတှေ၊ ဖုနျးတှေ၊ ကလေးတှေ၊ အလုပျကိစ်စတှေ မပါပဲ သူမကိုပဲ လုံးဝ သီးသနျ့ အခြိနျပေးထားပါ။ သူမကို ဒီနေ့ အဆငျပွလေား၊ ဘာတှေ ဖွဈခဲ့သေးလဲ။ မေးပေးပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို သငျ ဂရုစိုကျကွောငျး ပွရာရောကျပါတယျ။
၃. သူမကို အိမျပွငျထှကျလညျခှငျ့ပေးပါ
အခြိနျတိုငျး တူတူရှိနတောဟာ ကောငျးတဲ့ လက်ခဏာ မဟုတျပါဘူး။ အောငျမွငျတဲ့ခဈြဇာတျလမျးတှမှော လူနှဈယောကျဟာ တဈယောကျရဲ့ ဝါသနာ အမူအကငျြ့တှကေို တဈယောကျက လေးစားနရေမှာပါ။ သငျ့မိနျးမ သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သှားအိပျရငျ မတားပါနဲ့။ သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ခရီးထှကျခှငျ့ပေးပါ။ သငျ့မိနျးမကို သငျနဲ့ခညျြးတဈခြိနျလုံးမထားပါနဲ့။
၄. အသေးစိတျတှေ လိုကျမပွောပါနဲ့
သူမကို အရာရာမှာ မထိနျးခြုပျခငျြပါနဲ့။ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမဟာ ပွသနာတဈခုကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးပုံခွငျးကှာပါတယျ။ သူမဖွရှေငျးနပွေီဆိုရငျ သငျ့ပါးစပျပိတျထားပါ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ လူနှဈယောကျကွားပွသနာတှရေဲ့ သုံးပုံတဈပုံကိုပဲ ပွပွေလေညျလညျ ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ အဆငျမပွတောကွုံရတိုငျး ဖွရှေငျးဖို့ စကားမြားနမေယျဆိုရငျ မဖွဈနိုငျတာကို လုပျနတောပါပဲ။ တဈခါတဈလမှော သဘောထားကှဲလှဲခှငျ့ ပေးလိုကျပါ။
၆. သူမကိုလညျး နားထောငျပေးပါ
သဘောထားကှဲလှဲခှငျ့ပေးတာဟာ “ဟုတျကဲ့” ပွောပွီး ပါးစပျပိတျထားခိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ သငျက သူမအကွောငျးပွခကျြကို နားထောငျပေးပွီး သူမဘကျကနေ စဉျးစားပေးရမှာပါ။ သူမ ပွောတာ အဓိပ်ပါယျမရှိဘူးထငျရငျတောငျ အဲလိုလုပျရမှာပါ။ အဲဒါ သဘောတူပေးတာမဟုတျပါဘူး။ အဲဒါ သူမကို ပိုနားလညျပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားတာပါ။ ရနျဖွဈနခြေိနျ သှေးပူနတေုနျး နားထောငျမပေးနိုငျရငျ တခွား အေးဆေးသှားတဲ့ အခြိနျတှမှော ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
၇. သူမနဲ့ ပလူးပလဲနပေါ
သူမကို ဂရုစိုကျပေးပါ။ သူမကို ပလူးတဲ့စာလေးတှေ ပို့ပါ။ သူမကို လနျးတယျလို့ ပွောပါ။ မှေးနေ့ နှဈပါတျလညျတှလေမဟုတျတဲ့ ညတှမှောလညျး အိမျပွနျရငျ သူမအကွိုကျ ကိတျမုနျ့လေး ရံဖနျရံခါဆိုသလို ယူသှားပါ။ တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတှကေို တခွားသူစိမျးတှလေောကျတောငျ အာရုံမစိုကျမိတတျကွပါဘူး။ သူမလညျး သငျဂရုစိုကျတာ အရမျးလိုခငျြမှာပါ။
၈. သငျ့ဖိအားတှကေို ထုတျပွောပါ
ယောကျြားတျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့စိတျဖိစီးမှုတှကေို တိတျတိတျနခွေငျးနဲ့ဖွဈစေ၊ အပွငျထှကျသှားခွငျးနဲ့ဖွဈစေ ရှငျးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါဟာ သငျ့မိနျးမကို တလှဲထငျသှားစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှကေို သငျ့မိနျးမကို ပွောပွပွီး သူမဆီကနေ အကူအညီ ရယူလိုကျပါ။
၉. အတိတျကို ပွနျသှားပါ
တဈခါတဈလမှော သငျတို့နှဈယောကျ ဘယျလိုကနဘေယျလို တူတူနမေိကွတာလဲဆိုတာ ပွနျစဉျးစားရမှာပါ။ ပုံဟောငျးတှေ၊ ရညျးစားစာဟောငျးတှေ ပွနျကွညျ့ ပွနျဖတျပါ။ သငျနဲ့သူ ပထမဆုံးတှတေု့နျးက ရငျခုနျလှုပျရှားမှုတှကေို ပွနျရှာကွညျ့လိုကျပါ။ ပွနျခံစားနိုငျပါသေးတယျ။
၁၀. သငျ သူမကို ခဈြတဲ့ အခကျြလေးတှေ ပွောပွပါ
အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေးတှဟော တဈယောကျကိုတဈယောကျ တနျဖိုးထား ခဈြခွငျးတရားနဲ့ တညျဆောကျထားတာပါ။ သငျကတော့ သငျ သူ့ကိုလကျထပျလိုကျလို့ သငျသူ့ကို အရမျးခဈြတယျဆိုတာ သူသိနပွေီ ထငျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူမကို ခဈြတဲ့အကွောငျးလေးတှေ အမွဲ ပွောပေးနရေမှာပါ။
Previous: လက်မထပ်ခင် ကြိုတင်သိထားသင့်သည့်အချက်များ
Next: လိင်စိတ်ညှိးနေရင် ဘာလုပ်မလဲ။